Indlu entle eBaarle-Nassau kwindawo enkulu yehlathi
Eli khaya liphangaleleyo leholide eBaarle-Nassau linamagumbi okulala ama-3 abantu abayi-6. Ilungele iintsapho okanye izibini ezi-3. Apha, iindwendwe zinokuphumla echibini kwaye zonwabele i-barbecue.
Indawo ilungile kubahambi nabahambi ngebhayisikile. Umganyana nje wokulahla ilitye yindlela entle yebhayisekile: i'Bels Lijntje', unxibelelwano lukaloliwe oludala phakathi kweTilburg kunye neTurnhout. I-Dodendraadroute ikwathatha iindawo ezimangalisayo ezidlulileyo kwimbali yeWWI.
Ukusuka kwigumbi lokuhlala kunye ne-terrace unokonwabela umbono omnandi. Iindwendwe zingahlala zijikeleze ibarbecue eshushu egadini okanye zilale ngasechibini. Eli khaya leeholide likwanayo neshedi yeebhayisekile, ukufudumeza ngaphantsi kunye neendawo zokupaka.
Iimpelaveki zamadoda kunye nolutsha olungaphantsi kweminyaka engama-24 azivumelekanga.
Uyilo: Umgangatho ophantsi: (ikhitshi elivulekileyo (i-cooker (i-4 ring stoves), umatshini wekofu, i-microwave edibeneyo, i-dishwasher, ifriji), Indawo yokuhlala / igumbi lokutyela (iTV), igumbi lokulala (ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokuhlambela (ishawa, i-2x yokuhlambela), indlu yangasese)
Kumgangatho woku-1: (igumbi lokulala(ibhedi yebhedi), igumbi lokulala(2x ibhedi eyodwa), igumbi lokuhlambela(ishawa, isitya sokuhlambela, indlu yangasese))
ukufudumeza(ukufudumeza umgangatho), ithala, igadi, indawo yokugcina ibhayisekile, ifenitshala yegadi, BBQ, indawo yokupaka, ibhedi yabantwana, isitulo esiphezulu, isango lezinyuko
Izimvo eziyi-3 780